နာကျင်တဲ့ ဒဿနတွေ မရချင်တော့ဘူး | မ၀င်းမေ(နေမျိုး)
« အစ်မ မ၀င်းမေသို့ …..
မင်းကို တစ်ဝက်လောက်ပဲ နားလည်ခဲ့တုန်းက
ဒါဟာ ပြောပြလို့ ဘယ်တော့မှ
ခက်ခဲသော ငါတို့ အကြောင်းတွေရဲ့
အိမ်မှာ ကျွန်တော်မရှိခိုက် စာတိုက်မှ အမြန်ချောနှင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ရောက်လာသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ရနံ့သစ်မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှ ဖြစ်သည်။ အမြန်ချောစာအိတ်ကို သူက လက်မှတ်ထိုး၍ယူထားလိုက်သည်။ စာအိတ်ကိုဖွင့်၍ စာအုပ်ကိုလှပ်လိုက်တော့ အထဲမှာ စာမူခပါပါလာသည်။ ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု အိမ်မှာရောက်နေပြီဆိုတာကို မသိသေးဘဲ အပြင်မှ ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာသည်။ သူက အစ်မကြီးတစ်ယောက်လို တည်ငြိမ်မှုမျိုးနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်း စောင့်ကြိုတတ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ဝင်ငွေကို အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲသူ ဖြစ်ရုံမက ဘ၀၌ ကျွန်တော့်ကို ပို၍လေးနက် သူ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အကျပ်အတည်းများကြား၌ အတူတကွရှင်သန်ခဲ့ရ၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပုံတွေသည် ယခုထိ ရှင်သန်နေသော ပုံရိပ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် အစားမှား အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ပြီး ၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံး မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် နာလာသောနေ့က စိုးရိမ်ကြီးစွာဖြင့် ဆေးခန်းကိုပို့ခဲ့ပုံမှာ တသဖွယ်ပင်။ ဆေးခန်းကအပြန်မှာ တစ်ကိုယ်လုံးချမ်းတုန်ကာ နေလို့ ချစ်ဇနီး အစ်မ မ၀င်းမေက ကျွန်တော့်ကိုကောင်းစွာ ဖေးမခဲ့ပေသည်။ ။
This entry was posted on April 16, 2011, 2:39 pm and is filed under ချစ်ဇနီးသို့ အမှတ်ရချက်များ. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
#1 by AZPaing on May 16, 2011 - 8:41 am
တင်ထားတဲ့ကဗျာတစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ကျွန်တော် copy ဆွဲသွားပါတယ်။ အလျင်းသင့်တဲ့နေရာမှာ ပြန် share ခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဆရာနေမျိုးရဲ့ပရိတ်သက်ပါ။ ကြုံရင် facebook ပေါ်က ဆရာနေမျိုးရဲ့ fan page ကိုလာလည်ပါဦး။
နာကျင်တဲ့ ဒဿနတွေ မရချင်တော့ဘူး (နေမျိုး) « Lanolay